Curry digaag leh caano qumbaha - Recipe | Recipe
Cunnooyinka raaxada leh
Curry digaag leh caano qumbaha
Alicia tomero | 21/11/2021 19:47 | Recipes, Cuntada digaaga
Dhammaan cuntooyinka lagu sameeyay digaaga waa kuwo aad u fiican. Cunto ka duwan waxaad haysataa saxankan oo leh dhadhan curry caano qumbaha ah. Si dhib leh uma ogaan doontid inay aad uga duwan tahay dhaqanka, laakiin waxay kaa dhigi doontaa inaad isku daydo taabashadaas ka duwan oo aan caadi ahayn. Waxaan hubnaa inaad jeclaan doonto.
Cunto cuntooyin badan oo digaag leh waxaad isku dayi kartaa annaga Digaag digaag.
400 g digaag
1 basal dhexdhexaad ah
2 oo toon ah oo toon ah
300 ml oo caano qumbaha ah
150 g yaanyo ceeriin
Hal sacab oo dhir ah
1 shaaha shaaha
Saliid saytuun ah
Waan gooynay basasha iyon qaybo yaryar iyo toon Waxaan u googooyn doonaa si aad u yar. Waxaan kululeynaa dhowr qaado oo saliid ah oo ku jira skillet ballaaran waxaanu ku darnaa wixii aanu jarnay si uu u qaboojiyo.
Waan qabannaa digaagga waana ku gooynay taquitos yar. Waxaan ku dari doonaa digsiga marka basasha iyo toonta la shiilay. Waxaan sugeynaa dhowr daqiiqo in la sameeyo, anagoo siineyno dhowr wareeg.
Waxaan ku darnaa cusbo, basbaas iyo shaaha oo curry ah anaguna waan sii wadeynaa si uu midab u yeesho.
Waxaan gooyay yaanyo xabadaha yaryar waana ku daraynaa. Waxaan sii wadeynaa inaan wax walba u oggolaanno inay isla karsadaan daqiiqad kale.
Waxaan ku darnaa caanaha qumbaha waxaanan sugi doonaa wax walba si ay u wada kariyaan dhowr daqiiqo oo kale.
Waxaan u ogolaan doonaa caanuhu inay yareeyaan, laakiin iyada oo aan la karinin. Isla dhamaadka waxaan ku tuuri doonaa sacab muggiis oo ah dhir la jarjaray si loo dhammeeyo karinta.
Wadada buuxda ee maqaalka: warqad dhakhtar » Recipes » Curry digaag leh caano qumbaha
Kusoo hel cuntooyinka kujira emailkeyga
Baastada Alfredo oo leh maraqa digaaga
Brokoli gratin leh jiis
Cunnooyinka ku jira emaylkaaga
Dhammaan cuntooyinka ku jira emaylkaaga
Ku saabsan Recetín
Kusoo Biir Recipe